Naya Drishti | गण्डकीमा नयाँ ट्विस्ट : कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने जनमोर्चा सांसदको घोषणाले हंगामा - Naya Drishti गण्डकीमा नयाँ ट्विस्ट : कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने जनमोर्चा सांसदको घोषणाले हंगामा - Naya Drishti
वैशाख २९, पोखरा । गण्डकीको सत्ता समीकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भनेको जनमोर्चाका एक सांसदले कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेपछि प्रदेशको राजनीतिमा तरंग आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको खेल चलिरहँदा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरित उभिएका छन् । जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पक्षमा निर्णय गरेको छ, तर दलका नेता थापाले त्यसका लागि हस्ताक्षर दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
जनमोर्चाक गण्डकी प्रदेश सभामा ३ जना सांसद छन । गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक अवस्थामा छ । गण्डकीमा एमाले २७, कांग्रेस १५, माओवादी ११ र जसपा २ सिट छ । एक जना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले एमालेलाई समर्थन गरेका छन । यसैगरी माओवादी-कांग्रेस र जसपा मिल्दा २८ सिट हुन्छ भने, एमाले र स्वतन्त्र सांसद मिल्दा पनि २८ सिट नै हुन्छ । यहाँ जनमोर्चाले जता सहयोग गर्छ उतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
तर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने केन्द्रको निर्णयप्रति गण्डकीका तीन जना प्रदेशसभा सदस्य खुसी थिएनन् । तीनमध्ये एक प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही वैशाख १५ गते अविस्वास प्रस्तावमा मतदानकै दिन अस्पताल भर्ना भएपछि प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो गर्न मत हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो । उनी विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसउपर २७ गते गण्डकी प्रदेश सभामा मतदान हुने कार्यक्रम थियो । यस अगावै गुरुङले २६ गते राजीनामा दिएका हुन् ।
आइतबार गुरुङले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। उनको राजिनामा सँगै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ३ दिन भित्र नयाँ सरकार गठनको लागी आह्वान गरिसकेकी थिइन।
मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि कांग्रेस माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धन बाट सोमबार नै बहुमत देखाएर सरकार बनाउने योजनामा विपक्षी गठबन्धन थियो । उक्त गठबन्धनले कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर जनमोर्चाका संसदले समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर नगरेपछी उनिहरू तोकिएका थिए ।
तर अहिले जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । कांग्रेसकै बर्षौंदेखि कारण दुःख पाएको र मुद्धा खेपेकाले कांग्रेसलाई साथ दिन नसक्ने उनको अडान छ । मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नजिक थापाको यो निर्णयले पृथ्वीसुब्बालाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । उनी सँगै सांसद खिमबिक्रम शाही पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा छन । उनिहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने तयार छैनन । बरु पार्टीले कारबाही गरेपनि स्वीकर्ने पक्षमा छन ।
सांसद थापाले बरु कारवाही भोग्ने, तर कांग्रेसको पक्षमा नउभिने बताएका छन् । ८ वर्ष जनमोर्चा बागलुङ जिल्ला कमिटीको कार्यालय सचिव भएर काम गरेका थापाले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । गत चैत २६ गते बुटवलमा भएको महाभिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित थापा कांग्रेसले दिएको दुःख र स्थानीय जनताको दबाबका कारण यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए ।
वि. सं. २०५१ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पार्टीगत नीति र अनुशासनप्रति निकै कट्टर मानिन्छ । तर पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक पार्टी नीति क्रस हुने अवस्था आएको छ ।
जनमोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कृष्ण थापा बिकेकाले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन । थापाले पार्टी नीतिबिपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अध्यक्ष केसीले बताए । ‘पार्टीबाट सांसद हुने अनि जता नाफा हुन्छ, उतै लाग्ने सांसदलाई के गर्ने त ? कारबाही हुन्छ नि,’ केसीले भनेका छन – ‘पार्टीले नेता बनाउँछ तर भ्रष्ट भयो, विक्री भयो र यताउति गयो भने त्यसलाई पार्टीले फूलमाला लगाउँछ त ?’ कारबाही गर्छ नि ।’
१५ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन प्रदेशसभा सदस्य शाही हराउनु र अहिले दलका नेताले नै पार्टीको हृवीप उल्लंघन हुनुलाई शंकाको नजरले हेर्नेहरु पनि छन् । गण्डकीको संसदीय समिति प्रदेश मामिलाको सभापतिसमेत रहेका थापा यसअघि नै मन्त्री हुन चाहेको पार्टीका नेताहरुले नै बताएका छन् ।
बुटवलमा २६ गते सकिएको महाधिवेशनमा अहिलेको सरकारमा सहभागी नहुने पार्टीले निर्णय नै गरिदिएपछि थापाको दाँतमा ढुंगा लागेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘थापाले मन्त्री खाने तयारी थालेका थिए तर अध्यक्षज्यूले रोक्नुभयो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । अहिले मुख्यमन्त्रीसँगकै ‘सेटिङ’ आधारमा थापाको निर्णय गरेको जनमोर्चाका असन्तुष्ट समूहका नेताहरुको आरोप छ ।
थापा चाहिँ त्यो मान्न तयार छैनन् । पार्टी निर्देशनविपरीत उभिनुपर्ने के चाहिँ कारण आइलाग्यो त ?
पढ्नुहोस, अनलाइन खबर बाट साभार गरिएको कुराकानी
पार्टीले नयाँ सरकारको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताइरहँदा तपाईंले हस्ताक्षर गर्न किन अस्वीकार गर्नुभयो ?
कांग्रेसबाट देशको विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ, जनताको मुक्ति हुन्छ, राष्ट्रियता संरक्षण हुन्छ भन्ने सपना देख्नु दिवा स्वप्न हो । म जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएँ, त्यहाँ कांग्रेसको शासनकालमा अत्यान्तै ठूलो अन्याय र पीडा खेपेको छु । दजनौं घटनाहरु घटेका छन् । सयौं झुठा मुद्धाहरु छन् । कति साथीहरुले कांग्रेसको यातनाबाट अहिले पनि कष्ठकर जीवन बिताइरहनु भएको छ ।
ती कस्ता घटना हुन्, जसले पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गर्नुपर्‍यो ?
२०४२ सालमा जैमिनीको जनता माविको घटना, २०४८ सालको जैमिनीको घटना बागलुङको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन हो । जुन दिनले अहिले पनि हामीलाई तर्सारहन्छ । जैमिनी मेला, माघे सक्रान्तिमा लाग्ने धार्मिक मेला हो । त्यो मेलामा ज्ञानेश्वर वैद्यको हत्या भएको थियो । हत्या कसले गरेको भन्ने अज्ञात थियो । त्यही घटनालाई जोडेर मसाल सखाप अभियान चलाइयो । मसालको ४८/४९ जनालाई झुटा मुद्धा लगाइएको थियो । त्यो मुद्धामा पक्राउ परेका हाम्रा साथीहरुलाई ठूलो यातना दिइयो । पैंतालामा पिन कोबियो । कांग्रेसकै कारण हामीले त्यो मुद्धा बर्षौं खेप्नुपर्‍यो । अहिले पनि कति साथीहरुले दुःख खेपिरहेकै छन् । यस्ता दर्जनौं घटना छन् ।
जनमोर्चाकै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बागलुङकै हुनुहुन्छ, यो कुराको ज्ञात उहाँलाई पनि होला ? तर पार्टी नीति नै क्रस गर्नुपर्ने अवस्था तपाईंलाई मात्र किन आयो ?
यो अध्यक्षज्यूलाई पनि थाहा छ । तर, उहाँले अहिले स्थानीय जनताले के भन्छन् ? हामीले खेपेका पीडा के छन् ? हामी के चाहान्छौं भन्ने हेरिदिनुभएन । हाम्रा आवाज र वाध्यतालाई पनि सुन्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर पार्टी नेतृत्वको निर्णय जनता र कार्यकर्तासँग जोडिएन । हाम्रा माग अर्कै छन् । हामीलाई समस्या अर्कै छन् । नेतृत्वले लाद्न मात्रै खोज्नुहुन्न ।
५१ सालदेखि संसद छिरेको जनमोर्चामा पहिलो पटक हृवीप उलंघन भएको भएको छ, तपाईंको स्वार्थमा ठेस लाग्यो भन्छ नि पार्टीकै नेताहरु ?
पार्टीको नीतिविपरीत काम भएको यो पहिलो घटना होइन, जनमोर्चामा अन्य घटना पनि छन् । यसको अर्थ पार्टीको निर्देशन र नीतिविपरीत जाने मेरो रहर होइन । म पनि लामो समय त्याग र योगदान गरेरै यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हुँ । यो अवस्था किन आयो भन्ने कुरा पक्कै नेतृत्वले बुझ्ने छ ।
पार्टी नीतिविपरीत निर्णय गर्दा त सबैभन्दा ठूलो असर त तपाईंलाई नै होला नि ?
एकाध घटनाले राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन । जसका निम्ति राजनीति जीवन समर्पण गरें, एउटा घटनाले त्यही जीवन सकिएला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तर, पार्टीले अब कारबाही गर्ला नि ?
कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने योजना पनि होइन, भोलि मैले केही पाउने पनि होइन । केबल मेरो मन नमानेको हो र गठबन्धनमा समर्थन नगर्न मलाई स्थानीय दबाब पनि छ । त्यसैले यो कदम चाल्न बाध्य भएको हुँ । पार्टीले कारबाही गरे भाग्नै पर्दा ।
सत्ता पक्षसँग साँठगाँठ गर्‍यो, तपाई बिक्नुभयोसम्म पनि भन्न थालेको सुनियो नि ?
औंला उठाउन पाइयो, तर न्यायोचित ढंगले हेनुपर्छ । हामीले ३ वर्षसम्म पृथ्वीसुब्बाको सरकारलाई समर्थन गर्दा औंला नउठ्ने, अस्ति २६ गते राजीनामा दिएपछि औंला उठ्नुपर्ने कारण छ जस्तो लाग्दैन । यो लाभसँग होइन, सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । हामी कांग्रेसलाई कम्तिमा २० वर्षसम्म सत्ताभन्दा बाहिर राख्न चाहन्छौं । कम्तिमा कम्युनिस्टहरुको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौं ।
१५ गते मतदान गर्ने तयारी हुँदा खिमविक्रम शाही सम्पर्कबिहीन हुनुभयो, अहिले तपाईंले पार्टीको निर्णय मान्नु भएन । यसले ‘सेटिङ’को आरोपलाई बल पुग्दैन र ?
बिरामी भएर हस्पिटलमा जाँदा पनि नियोजित हुने, अर्को निर्णय गर्दा पनि नियोजित नै हुने, यो खास शंकामात्र हो । राजनीतिक भ्रष्टीकरण भएको मुलुकमा शंका गर्नु अस्वभाविक होइन । तर त्यस्तो कुनै कारण होइन, मेरो विवेक नमानेको हो ।
पृथ्वीसुब्बालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ हो कि कांग्रेसलाई बनाउनुहुन्न भन्ने हो तपाईंको मत ?
मूल समस्या कांग्रेसकै हो । कांग्रेसलाई समर्थन गर्न मनले मानेन ।
कांग्रेसको ठाउँमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भए मान्नुहुन्थ्यो ?
उधारो कुरा किन गरौं र ? त्यतातिर कुरा नगर्दै राम्रो होला ।